Chitendero & Kunamata Minyengetero & Kunamata
Maariv inodzokororwa manheru asi inonyanya ndiyo yeminyengetero yemusi nokuti nekuti, pane imwe nguva yechiHebheru, zuva rinobva manheru kusvika manheru.
Zvinoreva uye Origins
Inowanzonzi ma'ariv kana mukativ , muIsrael, basa remanheru rinowanzonzi saruv . Mashoko maviri aya anobva kune rechiHebheru rechiHebheru erev , zvinoreva "manheru." Mamwe minyengetero yemusi wega ndeye shacharit (basa rekumangwanani ) uye mincha (mushumiri wemasikati).
Iyi mitatu mitatu yeminamato yeminamato inotendwa yakabatanidzwa kuzvibayiro zvezuva nezuva (mangwanani, masikati, uye manheru) panguva dzeTemberi muJerusarema ( Mishnah Brachot 4: 1). Kunyange zvazvo zvibayiro zvakanga zvisati zvamboitwa usiku, avo vakashaya mukana wekupisa zvipfuwo pamusi iwoyo vaisarudza kuita saizvozvo manheru. Sezvo chisarudzo, munyengetero wemanheru zvakare wakanzwisiswa sechinhu chakanaka.
MuchiTalmud , maRabhi anoti iyomuv is ein la kava , zvinoreva kuti "pasina nguva yakatarwa" asi mukukurukurirana, Talmud inoti basa racho rinoshandiswa , kana kusarudzwa, sezvataurwa pamusoro apa. Izvi zvakasiyana nemasikati nemasikati mashumiro, ayo ari hovah , kana kuti mvumo ( Brachot 26a).
Pane imwe nguva, munyengetero wacho wakatorwa zvakare uye ukava mvumo, sezvazviri nhasi, kunyange zvazvo zvichiri zvimwe zvipfeko zvechimiro chokusarudza. Semuenzaniso, munyengetero weAmid , unowanzodzokororwa nemutungamiri wemunyengetero mumasikati nemasikati, hauna kudzokororwa mubasa raimov .
Zvimwe zviwanikwa zvinopa ushumiri hwemukativ kunyange zvakanyanya kumashure, zvichiratidza kuti Jakobho, mutateguru wechitatu akatanga musengetero wechitatu. MunaGenesisi 28:11, Jakobho anobuda Bheerishebha kuHarani, uye "akasangana panzvimbo iyo, nokuti zuva rakanga rava." Talmud inonzwisisa izvi kuti zvinoreva kuti Jakobho akagadza basa re mkativ .
Dzidza Zvakawanda Nezvebasa
Zvichida pfupi pane dzose zvemunamato wezuva nezuva, iyo yese maawa maawa anenge gumi kusvika ku15. Muzviitiko zvakawanda, masikati, kana mincha , basa uye iyo service service inodzokera kumashure sezvo munhu wese atova kusinagogi.
Kana uri kunyengetera uri woga, iyi ndiyo urongwa hwebasa:
Minyengetero yekutanga yeMapisarema 78:38 uye 20:10
Shema (zvinoreva "kunzwa") uye minyengetero yakabatana
The Amah: mararamiro ezvikomborero akadzokorora zvinyararire paaimira, izvo zvinoreva zvinoreva, izvo zvinonziwo Shemonei Esrei. Pakutanga, apo yakabatanidzwa muzana remakore rechi5 CE, munyengetero uyu waiva nezvikamu 18 (izvo zvinonzi Shemonei esrei zvinoreva), asi chimwe chikomborero chakawedzerwa kwezvikomborero zve19.
IA Aleinu, iro ndiro izwi rokutanga remunyengetero uyo mutongo wekutanga unoshandurwa se "Ndiyo basa redu kurumbidza Ishe wezvose."
Kana uri kunyengetera nemaminyan (chikwata chegumi), ipapo basa rinotanga nemutungamiri achitaura Kaddish naBarechu , iyo inonyanya kukoshesa kunyengetera. Uyezve, mutungamiri wekunamatira achadzokorora Kaddish isati yasvika uye shure kweAidha.
PaSabata, mazuva anotsanya, uye mamwe mazororo, panogona kunge kune zvimwe zvakasiyana uye / kana kuwedzerwa kune service munav .
Kana iri kuuya nguva, mukati mavo inogona kudzokororwa chero nguva mushure mokunge zuva rapera, kunyange zvazvo pane zvakananga pamusoro paunogona kudzokorora manheru Shema. Nokudaro, Rabbi Moshe Feinstein, guru guru remakore rechi20, akatonga kuti mukativ inofanira kutanga maminitsi 45 mushure mesiku.
Iyo yemazuva ano inogona kutaura kuti mukativ ndiyo inozivikanwa sa halachic pakati peusiku, iyo ndiyo hafu yenzvimbo pakati pezuva rezuva uye zuva robuda. Zvichienderana nokuti iSikati Day Savings Time, scan iri mberi kana pashure pe 12 am
Kana usina mubvunzo pamusoro penguva, edza kushandisa MyZmanim.com, kwaunogona kuvhara munzvimbo yako chaiyo uye ichakupa mazano akakodzera ekufungisisa kweminyengetero.
Chii chinonzi Mourner's Kaddish muchiJudha?
Rosh Hashanah Minyengetero uye Torah Readings
Chii Chinonzi Aishes Chayil?
Nhungamiro Yokunzwisisa Bracha
YechiJudha Shabbat Morning Service
Nziyo dzeHorodhe dzeMakoronike makumi mana e2012
Jar Anotsanangura Muvanhu Magetsi
Milankovitch Zvinyorwa: Maitiro Epasi Nezuva Anopindirana sei
Hank Williams uye Mhuri
Pablo Neruda, Nhetembo Yevanhu veChile
Tsanangudzo uye Mienzaniso yeConfactory Conjunctions
IM Pei, Architect of Glass Geometries
2017 - 2018 BASA reMabasa Kurega Dates
Nzira Yokubata Nayo neBad Lab Partners
'The Black Cat' - Nhoroondo Pfupi naEdgar Allan Poe
Mississippi State - GPA uye Test Test for Admission
Chipo: Chipo cheMweya Mutsvene
Zviratidzo zveLatin sezvinoreva munhu
Chii Chinosiyanisa Pakati Pekudzidza Asynchronous uye Synchronous?
Maitiro Akazvigadzirisa Mafambisi Anokwira (APC): Anoshanda Sei?
Nzira Yokuedza Kubika Bhodha uye Baking Soda Yokuvandudza
Mermaid Yakafa Yakawanikwa muPhilippines Hoax
5 Mabhuku Akanakisa Kutengesa Unofanirwa Kuverenga Kunzwisisa Donald Trump
Nyika Duku Kuduku Munyika
Chii Chinonzi 'Mulligan' muGorofu?
Kukunda Mudzimai weRibra
Kunyunyuta kwePeneten: Enda kumakuva uye Nyengeterera vakafa